03 shaqooyin yaab leh oo aad ka qaban karto guriga inta lagu jiro mudada coronavirus - teles relay
03 Shaqooyinka layaabka leh ee aad ka sameyn kartid Guriga Inta lagu gudajiro Xilligan Coronavirus
By bryanekobe On Juun 30, 2020
Dad badan ayaa ku qasbanaaday inay si lama filaan ah ugu wareegaan shaqada guriga inta lagu gudajiray coronavirus faafitaanka sababtoo ah xaaladaha shaqo ka joojinta. Dougal Shaw wuxuu la hadlay sadex qof shaqooyin ay weji ka weji ka weji ka yihiin guud ahaan loo arkaa inay muhiim yihiin, laakiin yaa ku helay shaqada fog inay la yaab ku tahay.
Waa shaqo u baahan kalsooni aan la qiyaasi karin, saaxiibtinnimo iyo xirfadaha dhagaysiga - laakiin ma in lagu qabtaa fool ka fool?
Shermeena Rabbi, 39, waa cilmi-nafsi yaqaan luqadeed hadalka iyo haweeney ganacsato ah oo ku nool Essex. Waxay hogaamisaa koox ka kooban 25 daaweeye oo la shaqeeya dadka qaba dhibaatooyinka isgaarsiinta. Macaamiishooda badankood waa qoysas leh caruur leh cudurka autism, cudurka Down's syndrome ama dadka qaba qallalka maskaxda.
Caadi ahaan, kooxdu waxay ka shaqeysaa kiliinigyada iyo iskuulada ku yaal London, laakiin tan iyo markii shaqada laga joojiyay, waxay ku qasbanaadeen inay arrimaha meel fog ka qabtaan. Dabiibuhu wuxuu ka yeerayaa gurigiisa taleefanka gurigiisa ilaa guriga macmiilka. Waxay ugu yeeraan teletherapy.
Sababtoo ah shaqadeena, gaar ahaan carruurta, waxay noqon kartaa mid shaqsiyeed, waji-ka-waji, ciyaar ku dhisan iyo jajabnaan, waxaan isweydiiney nafteena, "Sidee kani wax u wadaa? Markii hore waan ka niyad jabnay, ayay tidhi Shermeena.
Kalfadhiyada terabiga ee carruurta ayaa ku lug leh ka shaqeynta ku dhawaaqidda, inta badan iyadoo la falgalayo alaabada lagu ciyaaro, calaamadaha iyo buugaagta. Dhakhaatiirtu waxay sidoo kale wax ka qabtaan arrimo ballaadhan, sida dareenka diiradda la saarayo, ayay tidhi.
Xuquuqda sawirkaSHERMEENA RABBI
HalyeeygaShermeena waxay leedahay bukaanleyda da 'yarta ah waxay si fiican ula qabsadeen teletherapy-ga
Maaddaama daaweeyayaashu aysan ku sameyn karin muuqaalka jireed ee daaweynta internetka, waxay ku qasbanaadeen inay tan u wakiiyaan waalidiinta, kuwaas oo aan had iyo jeer joogi laheyn fadhiga.
Si kastaba ha noqotee, waxay noqotay wax la yaab leh oo dhiirrigeliya oo faa'iido leh, ayay tiri Shermeena.
Waxay la dhacsan tahay saameynta kal-fadhiyada daaweeynta internetka. "Bukaanka da'da yar, shaashadda dhijitaalka ah waxay qayb ka tahay nolosha caadiga ah," ayay tidhi.
Sidoo kale way fiicantahay in la arko bukaanada deegaanka qoyskooda waxayna yareysaa qiimaha safarka ee qof walba, ayay raacisay.
Khabiirada cilminafsiga-hadalka ayaa adeegsada codsiyada sida WhatsApp, Google Kulan iyo FaceTime.
Waxay raacayaan tilmaamaha xirfadeed ee teleefonka, liiska hubinta ee dammaanad qaadaya waxyaabaha sida tayada makarafoonka wanaagsan iyo awoodda loo arki karo wajiga bukaanka si cad, oo ay ku jiraan bushimaha iyo afka.
Kooxda waxay kulmayaan maalin walba saacada markay tahay 14:30 p.m. iyagoo wata wicitaan fiidiyow oo u gaar ah, markay wada hadlayaan oo ay la wadaagaan aqoontooda.
Isku raacidda ayaa ah inay sii wadayaan adeeggan kale ee beddelka ah xitaa marka la soo afjari karo qulqulka, oo ay yareyn doonaan dhismahooda jir ahaaneed.
Xuquuqda sawirkaANNA WOOD
HalyeeygaAnna Wood waxay ka hadlaysaa aroosyada dareemayaasha ah
Anna Wood, 40, waxay ku ordaa dukaankeeda dharka arooska ee tuulada Long Buckby, Northamptonshire.
Waxay hore u maamuli jirtay dhowr ganacsi oo khadka tooska ah ah, laakiin waxay had iyo jeer ku riyoon jirtay inay yeelato goobo ganacsi oo u gaar ah. Waxay fasax ka qaadatay shaqo si ay u guursato - waxayna noqotay markiisii ​​ugu fiicnaa.
"Waligay runtii ma helin khibrad aan u baahdo sidii aroosad markii aan booqday dukaamada, sidaa darteed waxaan arkay farqiga u dhexeeya suuqa," ayay tiri.
Waxay rabtay inay ku takhasusto aroosyada "dareema inay aad uga xun yihiin howsha una baahan caawimaad dhinaca ah," ayay tiri.
Waxay jeceshahay meesha ay dooratay - dabaqa koowaad ee dusha sare ee jikada lagu iibiyo oo ku taal High Street - sababta oo ah aroosyaasheeda mustaqbalka waxay dareemi doonaan inay meel u booqanayaan taariikh gaar ah, laakiin ma aha inay ka walwalaan kuwa socda. daaqadda ka eega.
Dukaankeeda ayaa la furay Oktoobar 2018 waxayna u adeegtay ku dhawaad ​​100 aroos ka hor intuusan coronavirus dhicin.
HalyeeygaAnna waligeed way ku riyoon jirtay inay leedahay dukaankeeda
Jean-Pascal Zadi: "Si fudud madow waa filim filim Faransiis ah, ...
500 oo ciidan ayaa abaabulay 7 maalmood si ay ula socdaan gooni goosadyada…
In kasta oo Anna ay jeceshahay barxadda, xannibaadda ayaa ku kaliftay inay wax weydiiso, waxayna hadda qorsheyneysaa inay ka takhalusto dukaanka jireed ka dib marka heshiiska kiradu dhammaado.
Waxay tiri iyada oo la shaqeyneysa aroosyada fogfog waqtiga la-imaadyada ayaa "si aan caadi aheyn loo bartey", laakiin aakhirka waxay macno u sameyneysaa ganacsigeeda, oo aan ka goynaynin qarashaadka waxyaabaha sida kirada ah. , sicirka ganacsiga iyo biilasha adeegyada.
Waxay kala hadli kartaa dharka suurtagalka ah macaamiisha iyada oo loo marayo wicitaanka fiidiyaha, ay u dirto sawirro, ka dibna ay u diyaarsato qalab ku habboon dukaamada naqshadeeyayaasha ama guriga aroosadda (waxay kuxiran tahay xeerarka qufulka).
Shaqo joojintuna waxay u saamaxday inay diirada saarto qayb ka mid ah meheradda ay heshay inta badan abaal marin ahaan - waxa ay ugu yeedho inay tababarto aroosadda. Anna ma aha in dumarka oo dhami ay ku guursadaan meel runtii farxad leh, qaarna waa walaac badan yihiin waxayna leeyihiin arrimo isku kalsoonaan, ayay tidhi Anna.
HalyeeygaAnna waxay u aragtaa mustaqbal kulamada fiidiyaha ee aroosyada mustaqbalka
Waxay had iyo jeer ku bixisaa hadalkeeda 'pep' qayb gaar ah oo ka mida bakhaarka - laakiin waxay ogaatay in qaybtan adeegga ku dhow ay si la yaab leh ugu shaqeyn karto qadka tooska ah, wicitaanada fiidiyaha.
Dadka ka shaqeeya warshadaha arooska ayaa muddo dheer garowsanaa inay wax iibsadaan khadka internetka, laakiin waxay u maleeyeen inay ka hortagayaan sababta oo ah waa adeeg takhasus u leh shaqsiyanna, ayay tiri Anna.
Laakiin xiritaanka ayaa u oggolaaneysa dadka inay ogaadaan inaad sidoo kale khadka tooska ah uga heli karto adeeg shaqsi ku qanacsan.
Jiilka cusub ee dadka is guursanaya ee labaatan iyo labaatanaad iyo gaar ahaan soddonka qaangaarka ah waxay ku koreen sidii waddan ku dhashay dhijitaal ahaan waxayna aad uga diyaar yihiin xilligan kala guurka ah, ayay tidhi.
Xuquuqda sawirkaANNABEL SHEEN
HalyeeygaSoosaaraha dhijitaalka ah Annabel Sheen ayaan weli la kulmin mid ka mid ah saaxiibadeeda madxafka
Annabel Sheen, 30, waxay ku biirtay matxafka dagaal ee Imperial War ee ku yaal London bishii Abriil. Madxafka ayaa loo xiray dadweynaha sababtoo ah coronavirus.
Caadi ahaan, dhismuhu wuxuu udub dhexaad u ahaan lahaa howlaha maalin laha ah. Doorkeedu waa in nolosha la siiyo aruurinta - takhasuskiisuna waa xaqiijinta bandhigyada dijitaalka ah.
"Weli lama kulmin mid ka mid ah asxaabteyda shaqsi ahaan, xitaa ma aanan helin kaarkeyga shaqsiyeed," ayay tidhi.
Ka shaqeynta matxafka waxay ogaaneysaa meelaha jirku ka kooban yahay, soo-bandhigyada iyo baaruurrada, sidaa darteed xiridda waxay ahayd caqabad weyn.
"Ku dhawaad ​​wax kasta oo aan ka shaqeeyo waa waxyaabo cusub oo aan qayb ka ahayn qorshaha kooxdeena bilo kahor," ayay raacisay.
Tusaale ahaan, way garatay muuqaalkan - si sax ah, waqti wicitaanno Zoom - ciidammada Ingriiska ee Bariga Fogna u diraya farriin muuqaal ah oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay kuwa ay jecel yihiin 1945
Xuquuqda sawirkaMUUQAAL WAR MUXAADARO AH
HalyeeygaCurator Michelle Kirby waxay ku qasbanayd inay iska xayeysiiso taleefankeeda casriga ah
Helitaanka fiidiyowga kaydka maahan wax dhibaato ah, laakiin wareysiga baaraha ayaa ku soo daray khibradeeda xagga tafatirka oo la micno ah samaynta habab shaqo oo cusub.
"Waa inaan wax ka weydiinnaa muxaafidyada [kombuyuutarrada fiidiyowga ah] kooxaha oo aan weydiisannaa inay iska diiwaan geliyaan taleefannadooda casriga ah halkii ay ka isticmaali lahaayeen kamarad iyo qalab maqal oo munaasib ah sidaan caadiyan ahaan lahayn," ayay tidhi.
In kasta oo heesaha qaar ay ahayd in laga diido daabacaadda, Annabel waxay si la yaab leh ugu la yaabtay tayada shaqadeedii ay soo saartay.
Muxaadarooyinka dadweynaha ee ka dhici lahaa madxafka ayaa sidoo kale u haajiray khadka tooska ah ee internetka, waana inay sidoo kale gacan ka geystaan ​​baahintooda tooska ah.
Waxay sugeysaa inay ugu dambeyntii la kulanto kooxdeeda shaqsi ahaan markii qufulka la sii daayo oo madxafka la furo.
"Hada," waxay tiri, "Waxaan ahay kaliya labo baal oo shaashadda hoose inta aan ku sugnaa kulan weyn. "
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore on: https://www.bbc.com/news/business-53058368
Noocyada cunto karinta waxay keenaan khatar caafimaad
Iiraan ayaa soo saartay warqad xirasho ah Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
500 oo askari ayaa abaabulay 7 maalmood si ay u ugaadhsadaan kuwa gooni goosadka ah ee jooga…
Sawirada meeraha Jupiter sida aan waligeen horey u arag